❤️ Yisiphi isikhathi esingcono kakhulu sokuthumela ku-Instagram ? - Facebook
Ngisiphi isikhathi esihle sokubhala ku-Instagram ?
Uma uzama ukukhulisa amazinga akho okuzibandakanya futhi wandise ikhasimende lakho, okuthunyelwe kwakho kufanele kudonse inani eliphezulu lokunakwa isikhathi ngasinye. Kunezinto eziningana ongazenza ukukhulisa ukuzibandakanya kwakho., futhi kwaxoxwa ngazo ngokuningiliziwe esigabeni sethu sebhulogi:
Zibhekise kubo ama-hashtag ethandwa
Bhala umlando Instagram okuphawulekayo
Dala ifayela le- ubuhle ukugqama
Uma wenza zonke lezi zinto futhi ukhiqiza okuqukethwe okuhle, kunento eyodwa yokugcina ongayenza ukwenza isikhundla sakho siphumelele:
Yenza okuthunyelwe lapho wonke umuntu eku-inthanethi.
Lokhu ngeke kuvumele kuphela abantu abaningi ukuthi babone okuthunyelwe kwakho., kodwa futhi nokukhulisa amandla ayo okusetshenziswa nokwabelana. Kufanele sicabangele izinto ezithile phakathi nalokhu kusebenza. Ngakho-ke ake siqale ngokuthola isikhathi esihle sokushicilela okuthunyelwe kwakho ku-Instagram..
Ngabe kukhona isikhathi esihle sokwenza okuthunyelwe ku-Instagram ?
Kafushane, kubonakala sengathi kunezinsuku nezikhathi ezithile lapho umphakathi we-Instagram uwonke usebenza kakhulu. Bheka leli grafu elibonisa wonke amazinga wokuzibandakanya e-Instagram ku-CST : (I-CST ingemuva kwamahora angu-5 nge-GMT)
Leli thebula likhombisa ukuthi izinsuku ezinhle kakhulu zokuthumela ku-Instagram yilezi:
Futhi siyabona ukuthi izikhathi ezinhle kakhulu zokuthumela ku-Instagram yilezi:
NgoLwesithathu ngo-11 ekuseni.
NgoLwesithathu ngo-1 emini.
NgoLwesihlanu ngo-9 ekuseni.
NgoLwesihlanu ngo-10 ekuseni.
Siyabona futhi ukuthi izinsuku ezimbi kakhulu ukuthumela:
Futhi izikhathi ezimbi kakhulu ukuthumela yilezi:
Nsuku zonke kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-4 ekuseni.
Lokhu kukodwa kusinikeza indawo enhle yokuqala iposi ngesikhathi esifanele ukuthola ukubandakanyeka okukhulu kakhulu..
Kuthiwani Ngezindawo Zesikhathi ?
Izindawo zesikhathi ziyisici esinqumayo ekukhetheni isikhathi esihle sokuthumela ezinkundleni zokuxhumana. Uma iningi lezithameli zakho liphesheya, kufanele ucabangele ukuguqula isu lakho lokuthumela ukuze uhlangabezane namashejuli alaba bantu.
Lokhu kusho ukuthi uma use-UK futhi kunabantu abaningi e-US naseCanada abanentshisekelo kokuqukethwe kwakho, kufanele usebenzise ishadi elingenhla bese wengeza amahora angu-5 ezikhathini ezifanele.
Ngokwesibonelo, uma use-UK futhi kunabantu abaningi e-US naseCanada abanentshisekelo kokuqukethwe kwakho, kufanele usebenzise igrafu engenhla bese wengeza amahora angu-5 ezikhathini ezifanele :
Uma ufuna ukuchitha isikhathi sangoLwesithathu ngo-11am eChicago, kufanele uthumele lapha e-UK ngo-4pm.
Uma ufuna ukuthinta zombili izindawo zesikhathi ngasikhathi sinye, cabanga ukuhlukanisa umehluko nokubamba okwakamuva kwe-UK engagement spikes ngokuthumela ngo-2pm, ukuze uthole ukuzinikela okuhle e-United States kusukela ngo-9 ekuseni..
Kunamathuluzi akusiza ukwenza amashifu ngezikhathi ezithile ngokungaguquguquki ngokuhlela amashifu.
Endlini ka IBF, sihlanganise endaweni yethu yesikhulumi uhlelo oluhle kakhulu olukuvumela ukuthi usethe uhlelo lweziteshi ngaphandle kokukhathazeka ngakho.
Thola ukuthi izethameli zakho zisebenza nini usebenzisa imininingwane ye-Instagram
Uma une-akhawunti yebhizinisi le-Instagram, I-Instagram yenza kube lula ukubuka amamethrikhi wakho wokuzibandakanya nge-Instagram Insights. I-Instagram Insights ikunikeza imininingwane eyenziwe nge-akhawunti yakho, kulula ukuyiqonda futhi kulula ukuyifinyelela:
Ukufinyelela ekhasini lakho le-akhawunti ngokucindezela isithonjana ngezansi kwesokudla kwesithombe sakho sephrofayili
Cindezela kwimenyu “ibhambha” phezulu kwesokudla
Thinta inketho ye-Insights eneshadi lebha eliseduze kwayo
Ungashintsha kusuka ezibalweni zokuqukethwe uye kudatha yomsebenzi namamethrikhi ezethameli.
Ngenxa yalezi ihluzo, ungathola imininingwane enemininingwane yokuthi izilaleli zakho zibandakanyeka kanjani, nokuthi ikuphi futhi ikuphi.
Siyakubona lokho kule akhawunti, UMsombuluko nangoLwesithathu bekuyizinsuku ezihamba phambili zokukhula kwephrofayili, okuhambisana netafula lethu lonke lokuzibophezela. Futhi singabona izindawo ezinhle kakhulu, okuwulwazi olukhulu ukwazi uma ubheka izindawo zesikhathi nesikhathi sokushicilelwa.
Ngalolu lwazi, kufanele ukwazi ukucacisa iphoyinti lakho lokudonsa ngqo lesibonisi ukuze uzuze izinga eliphakeme lokuzibandakanya.
Futhi singabona izinto ezinjengokuhlukaniswa kobulili, kanye nezikhathi lapho abalandeli bale akhawunti basebenza kakhulu.
Qala ukusebenzisa ama-Instagram Posts akho
Uma ufuna ukukhulisa i-akhawunti yakho futhi uthole amazinga angcono kakhulu okubandakanya, kufanele usebenzise lezi zinhlelo ukuze uzuze. Kukhona nezinye izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni ezivumela abasebenzisi be-Instagram ukuthi babone olunye ulwazi nge-akhawunti yabo ngendlela ewusizo ekukhuleni kwe-akhawunti yabo..
Ukuqapha Komphakathi inikeza imininingwane elula, ejulile ukuze ukwazi ukuqonda kangcono izithameli zakho futhi ulandele inqubekela phambili ye-akhawunti yakho. Njengamanje benza isivivinyo samahhala, ngakho-ke bhalisa bese uqala manje. Ungayihlanganisa neyethu isoftware ehlakaniphile yokuzenzekelayo futhi uhlele ukushicilelwa ngesikhathi esihle ukuze uthole ukubandakanyeka okuphezulu kakhulu ku-akhawunti yakho.
23 Izindlela zika-2021I-Instagram ngeke ingivumele ngingene : Facebook
23 Izindlela zika-2021Uyengeza kanjani indaba ku-Instagram